Waa maxay sababta ay u sii badanayaan duufaannada badda ee ay ku badan yihiin taraafikada badaha? | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay sababta ay u sii badanayaan duufaannada badda ee ay ku badan yihiin taraafikada badaha?
Duufaanta badda ayaa si aad ah u xiiseyneysa meelaha qaar ee adduunka. Duufaanta si toos ah ugu tiirsan labada marin ee adduunka ugu mashquulka badan, waxay si gaar ah uga awood badan yihiin meelahaas bada ah ee maraakiibtu aysan u safrin.
Tani waxay noqon kartaa ama ma noqon karto taallo. Sidaa darteed cilmi baarayaal uu hogaaminayo Gabdhaha Katrina, saynisyahan ku takhasusay cilmiga hawada ee NASA's Marshall Space Flight Center, oo ku taal Huntsville, Alabama, iyo Joel Thornton, oo ah khabiir isla takhasuska ku leh Jaamacadda Washington ee Seattle, labada hay'adood ee Mareykanka waxay daraasad ku sameeyeen sababta ay u dhacdo. tan.
1 Duufaanta badda
2 Isbeddel ku sameysma daruuraha
Si loo fahmo sababta duufaannada badda ee ka xoog badani ka jiraan meelaha ay maraakiibta marayaan iyo meelaha aan daciifka ka ahayn, kooxda Katrina waxay khariidadeeyeen muuqaalka hillaaca adduunka oo dhan.
Falanqaynta qeybinta iyo jiritaanka hillaaca adduunka, waxaa la ogaaday inay la dhacaan ku dhowaad laba jeer sida badan toos uga sareeya marinada maraakiibta sida aadka ah looga ganacsado ee Badweynta Hindiya iyo Badda Koofurta Shiinaha marka loo eego aagagga badda ee ku teedsan marinnada maraakiibta iyo leh cimilo isku mid ah.
Farqigaas u dhexeeya joogitaanka duufaannada hal meel iyo mid kale laguma sharixi karo habab dabiici ah ama "iska-soo-bax fudud", laakiin waxaa lagu soo gabagabeeyay in walxaha aerosol ee ay daaqaan qiiqa maraakiibta waxay beddelayaan geeddi-socodka daruuraha ka samaysan badda dusheeda.
Isbeddel ku sameysma daruuraha
Qiiqa gaaska maraakiibta ee hawada ayaa beddelaya sameynta daruuro ka sarreysa badda. Sababtaas awgeed, duufaanno badan oo ka xoog badan ayaa ka dhaca halka ugu mashquulka badan marinnada badda, maadaama ay yihiin meelaha ay ka sii badan yihiin qiiqa aerosol.
Baarayaasha ayaa soo gabagabeeyay in walxaha ay soo saarto qiiqa sigaarka markabku ay ka dhigayaan dhibcaha daruuraha yar yar, iyaga oo sare ugu qaadaya jawiga. Tani waxay abuurtaa waxyaabo badan oo baraf ah waxayna u horseedaa firfircooni koronto badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay sababta ay u sii badanayaan duufaannada badda ee ay ku badan yihiin taraafikada badaha?
Daruuraha Píleo, haybad kale oo cirka
Waxay abuuraan qalab cusub si loo ogaado calaamadaha isbeddelka cimilada